Izithasiselo zaseChina zesihlabathi sosimende esomile Ukukhiqiza kanye Nemboni | I-Fluffier
Ukusekelwa kwezobuchwepheshe okuku-inthanethi, Ukuqeqeshwa Kwasendaweni, Ukuhlolwa Kwendawo
Ihhotela, Udaka oluhlukahlukene lwezimboni noma lwezokwakha
Isengezo sodaka olomile sisetshenziselwa ukukhiqiza udaka olomile oseluxubile futhi lulungele ukhonkolo wokwenziwa kanye nodaka lwamatshe. Ukufakwa kwengxube okungu-0.04% kuphela okungaveza umphumela osobala futhi umthamo usetshenziswa ngokuya ngemfuneko yomkhiqizo ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kodaka njengokusebenza, ukubola, amandla, ukuncipha kanye nokungabekezeleleki kweqhwa.
Njengengxube kakhonkolo, ingxube yodaka olomile ingaqinisa ukusebenza kodaka lukasimende ngokwenza ngcono ukusebenza, indawo yokugcina amanzi kanye nokusebenza kahle kwezitini kanye nokunciphisa ukumosheka kukasimende nokunamathisela umcako. Ingxube yodaka olomile ingahlakaza, ifake igwebu futhi igwebe usimende ukuze kuxazululwe inkinga evamile yokuxebuka nokuqhekeka. Le ngxube ingase ikhulise ukugcwala kodaka futhi idlale indima ephumelelayo ekunqandeni ukuqhwa, ekunciphiseni amanzi, ekunqandeni ukungena emanzini, ekunqandeni ukuqhekeka, ukulondoloza ukushisa kanye nokufaka i-insulating ngemva kokuqina.
Isetshenziswa emikhiqizweni kasimende efana nodaka oluhlukahlukene lwezimboni noma lwezokwakha, udaka lokuplasta, udaka lukasimende, i-asbestos shingle, izitini ezingenalutho kanye nebhodi elincane.
1.Isipiliyoni esicebile ekukhiqizeni nasekusetshenzisweni.
2. Umkhiqizi wokuqala owacwaninga ngokuzimela, wathuthukisa futhi wakhiqiza imikhiqizo engeza amakhemikhali yokwakha, okuhlanganisa i-Redispersible Polymer powder, i-Hydroxypropyl Methyl Cellulose, i-Polyvinyl Alcohol kanye ne-Superplasticizer esifundazweni sase-Hebei.
3.Uhlu olubanzi lwemikhiqizo engeza ukwakhiwa.
Ukulethwa kwe-5.Fast kanye nesevisi enhle kakhulu yangemva kokuthengisa.
Okwedlule: Isakhiwo Esisezingeni Eliphansi Samanani Aphansi sisebenzisa I-Dry Mortar Additive
Olandelayo: Fine Factory intengo yosizo lokugaya usimende Isithasiselo se-Cement
Izithasiselo Zodaka Ezomile
Izithasiselo Zodaka Ezihlinzekwa Yifekthri
Isengezo se-Factory Supply Mortar
Izithasiselo Ezinhle Zodaka Olulomile
Isengezo Sekhwalithi Enhle Yodaka
Isengezo Sodaka Esisezingeni Eliphezulu
Izithasiselo Zodaka Ezisezingeni Eliphezulu
Isengezo Sodaka Esisezingeni Eliphezulu Sokuxuba Okumanzi
Inani Eliphansi Izithasiselo Zodaka Ezomile
Izithasiselo Zodaka Eziphansi
Intengo Ephansi Sixuba Isithako Sodaka
Isengezo Esiphezulu Sebanga Lodaka
Izithasiselo Eziphezulu Zebanga Lodaka
I-Top Grade I-Wet Mixing Mortar Additives
Isengezo Sodaka Esihlanganisiwe Esisezingeni Eliphezulu
Izinga Eliphezulu Elimanzi Izithako Zodaka Ezixubile
Izithasiselo Eziphezulu Zodaka Olulomile
Izithako Ezisezingeni Eliphezulu Ezimanzi Ezixubile Zodaka
Isengezo Esimanzi Esixubile Sodaka
Isengezo Esimanzi Sokuxuba Udaka
Ukuxuba Okumanzi Izithako Zodaka
Isengezo Sodaka Oluxuba Okumanzi
Isakhiwo Esisezingeni Eliphansi Samanani Aphansi sisebenzisa i-Dry Mort...
Izithako zikakhonkolo ezomile ezixubene nodaka w...